Shiinaha Ceramic/Hawo kululeeyayaasha gariiradda furan/kuleylka leh NiCr8020 silig kululaynta Warshadaynta iyo Warshadda | TANKII
Dhoobada/hawada Kuleyliyaha gariiradda furan/qeybta kululaynta leh NiCr8020 silig kululaynta
Kuleyliyeyaasha furan ee furan waa kululeeyayaasha hawada kuwaas oo si toos ah ugu soo bandhigaya meesha ugu sarreysa ee kuleylka kuleylka hawada. Xulashada daawaha, cabbirka, iyo cabirka siligga ayaa si xeeladaysan loo doortay si loo abuuro xal caadiya oo ku salaysan baahida gaarka ah ee arjiga. Shuruudaha codsiga aasaasiga ah ee la tixgelinayo waxaa ka mid ah heerkulka, socodka hawada, cadaadiska hawada, bay'ada, xawaaraha sare u kaca, inta jeer ee baaskiilka, meel jireed, awoodda la heli karo, iyo nolosha kululeeyaha.
Qaybaha gariiradda furan ayaa ah nooca ugu wax ku oolka badan ee kuleylka korontada halka sidoo kale ugu macquulsan dhaqaale ahaan inta badan codsiyada kuleylka. Waxaa inta badan loo adeegsadaa warshadaha kululaynta tuubada, walxaha gariiradda furan waxay leeyihiin wareegyo furan oo hawada si toos ah uga kululeeya gariiradda iska -caabinta ee la laalay. Waxyaabahan kululaynta warshaduhu waxay leeyihiin waqtiyo kulayl degdeg ah oo hagaajiya hufnaanta waxaana loogu talagalay dayactir hooseeya iyo si fudud, qaybo beddel aan raqiis ahayn.
TANKII waa soo saare hormuud u ah kululeeyayaasha gariiradda furan, oo ku takhasusay xalalka kululaynta ee sida gaarka ah loo farsameeyay si ay ugu haboonaadaan shuruudaha saxda ah. Waxaan bixinnaa khad caadi ah oo kululeeyayaasha gariiradda furan oo la beddeli karo.
Qaybaha kululaynta gariiradda furan ee TANKII waxaa sida caadiga ah loo sameeyaa kululaynta hannaanka tuubada, hawo qasab ah & foorno iyo codsiyada kululaynta tuubooyinka. Kuleyliyeyaasha furan ee furan waxaa loo isticmaalaa haanta iyo kuleylka kuleylka iyo/ama tubbada birta. Meesha ugu yar ee nadiifinta 1/8 '' ayaa loo baahan yahay inta u dhaxaysa dhoobada iyo derbiga gudaha tuubada. Ku -rakibidda qayb gariiradda furan waxay bixin doontaa kulayl aad u fiican oo lebis ah oo ka sarreeya aag ballaadhan.
Qaybaha kululeeyaha furan ee furan waa xal kululaynta warshadaha oo aan toos ahayn si loo yareeyo shuruudaha cufnaanta watt ama qulqulka kulaylka aagga dusha tuubada ee ku xiran qaybta kululaynta oo looga hortago in agabyada xasaasiga ah kululeeyaan ama dillaacaan.
Faa'iidooyinka Qaybaha kululaynta furan ee gariiradda furan:
Haddii aad raadineyso badeecad ku habboon dalabkaaga kuleylinta bannaan ee fudud, waxaa wanaagsan inaad ka fekerto kuleyliyaha mareegaha furan, maadaama ay bixiso soosaar kW hoose.
lagu heli karo cabbir yar marka la barbardhigo qaybta kululaynta tuubada
Waxay si toos ah u siideyneysaa kuleylka hawo -mareenka, taas oo ka dhigaysa inay ka shaqeyso qabow in curiyaha tuubada finned
Uu leeyahay hoos u dhac cadaadis
Waxay bixisaa nadiifin koronto oo weyn
Isticmaalka walxaha kululaynta saxda ah ee codsiyada kululaynta ayaa kaa caawin kara yaraynta kharashka wax -soo -saarkaaga. Haddii aad u baahan tahay lammaane lagu kalsoonaan karo baahidaada codsiga warshadaha, nala soo xiriir maanta. Mid ka mid ah khabiiradayada taageerada macaamiisha ayaa sugi doona inuu ku caawiyo.
Xulashada qiyaasta siligga saxda ah, nooca siligga iyo dhexroorka gariiradda waxay u baahan tahay khibrad aad u yar. Waxaa jira waxyaalo caadi ah oo suuqa laga heli karo, laakiin iska daa inta badan waxay u baahan yihiin in si caadiya loo dhiso. Kuleyliyeyaasha hawo -mareenka furan waxay si fiican ugu shaqeeyaan xawaaraha hawada ee 80 FPM. Xawaaraha sare ee hawada ayaa sababi kara in gariiradu is taabtaan oo soo gaabiyeen. Xawaaraha sare, dooro kuleyliyaha hawo -mareenka ama kululeeyaha xariiqa.
Faa'iidada weyn ee walxaha kululaynta furan ee furan waa waqtiga jawaabta aad u dhaqsaha badan.
Waxaa jira alaab kululaynta furan oo heer sare ah oo laga heli karo suuqa oo aan qaarkood ku hayno kayd. Inta badan waxyaabahani waxay u baahan yihiin hawo joogto ah oo ka sarreysa siligga iska caabbinta, laakiin haddii cufnaanta watt ay hooseyso oo ku filan waxaa laga yaabaa inaysan ku gubin hawo hawo leh.
Hore: Gariiradda Guga
Xiga: Quartz kululeeyaha infrared
Shiinaha Kulaylka Kulaylka Wire
Kulaylinta Silig Xaniban
Fiilooyinka kululaynta iyo fiilooyinka
Qalabka Birta Kuleylka Kuleylka
Nicr 80/20 Silig kululaynta
Qaybaha kululaynta gariiradda furan Korontada / Caafimaadka ...
Kuleyliyaha ballaaran ee furan ee kululeeyaha furan Heerka Hawada Hawada ...
Nabarka Wire gariiradda furan gariiradda Dhexroor yar Co ...
Gariiradda Dhexroor Weyn oo Furaha Fiilo Nicrome Wire Ele ...
Kuleyliyaha kuleyliyaha korantada furan oo leh NiCr 80 wi ...
Qaybaha kululaynta gariiradda furan ee kululaynta sy ...
No.8, Laohuren Industrial Park, Xuzhou Economic Development Zone, Jiangsu, 221011 Shiinaha
Bayonet Element Element, Qaybaha kululaynta, Fur gariiradda kululeeyaha, Nickel Wire, Wire Resistance, Bayonet kululeeyaha,